Akụkọ - NTỤKWỤKWỌ NTỤTA ỤBỌCHỊ MGBE ECHICHE
Mpempe akwụkwọ mbadamba usoro:
Akwụkwọ nkwakọ ngwaahịa gụnyere c1s bọọdụ ọdụm/FBB, FBB buru ibu, GC1, GC2, bọọdụ isi awọ, bọọdụ testliner dị ọcha, akwụkwọ ntanetị kraft, bọọdụ duplex isi awọ azụ/azụ azụ, bọọdụ ojii.
ỤBỌDỤ C1S IVORY/FBB
C1s osisi ọdụm bụ ụdị mkpuchi mkpuchi. A makwaara ya dị ka bọọdụ mpịachi mpịachi.Short maka FBB..Ọ bụ akwụkwọ mbipụta akwụkwọ adịchaghị nke sitere na akwụkwọ isi nwere mkpuchi ọcha. Akwụkwọ obibi akwụkwọ silk nwere ike izute ihe dị iche iche na-eme nhazi. grammage zuru ezu bụ 170g, 190g, 210g, 250g, 270g, 300g, 350g, 400g.Ọ na-ejikarị dị ka mkpuchi akwụkwọ, kaadị ekele, mkpuchi akwụkwọ akụkọ, mkpado ngwongwo, igbe ọgwụ, igbe ịchọ mma na igbe ndị ọzọ.
EGO dị elu FBB/GC1/GC2
Nnukwu FBB bụ ụdị ihe mkpuchi .Ọha ọzọ dị ka GC1, GC2.Ọ bụ ngwaahịa akụ na ụba nke c1s ọdụ ọdụ/FBB.Ọ bụ nnukwu oke na isi ike. Nnukwu FBB nwere ike wedata grammage n'okpuru otu ọkpụrụkpụ ma e jiri ya tụnyere nke nkịtị Ngwaahịa .. Ma ọ bụ nwee oke ọkpụrụkpụ site n'otu grammage ma e jiri ya tụnyere FBB nkịtị.Grammage bụ 200g, 220g, 250g, 270g, 300g, 325g, 350g. , igbe ọgwụ, igbe ịchọ mma na igbe ndị ọzọ.
Grey board bụ ụdị akwụkwọ a na-edeghị ede. igbe onyinye, igbe uwe elu, igbe akpụkpọ ụkwụ, mkpuchi akwụkwọ, kalenda, na ngwa ụlọ.
White top testliner osisi bụ ụdị ntekwasa paper.Other aha dị ka ntekwasa kraft akwụkwọ, kraft liner board.It ọ ntekwasa otu side.One otu na -acha ọcha na agba na ọzọ n'akụkụ kraft agba.The grammage cover 110g, 125g, 140g, 145g, 170g, 180g, 200g, 220g, 235g. Ihe kachasị eji eme ihe bụ maka igbe, katọn ngwaahịa kwa ụbọchị, katọn nkwakọ ngwaahịa nri mmiri, akpa envelopu na igbe ngwa ahịa.
DUPLEX BOARD GRAY/azụ azụ
Duplex board gray back/white bụ ụdị akwụkwọ mkpuchi, ọ bụ aha dị mkpirikpi maka GD3 ma ọ bụ GD4, a na -ekpuchi ya n'otu akụkụ. Otu akụkụ na -acha ọcha n'akụkụ ọzọ isi awọ ma ọ bụ agba ọcha. Tumadi grammage bụ 230g, 250g, 300g, 350g, 400g , 450g..A na -eji ya eme ọtụtụ ụdị igbe dị ka igbe ụmụaka, igbe akpụkpọ ụkwụ, igbe uwe, na igbe envelopu.
Black osisi bụ ụdị uncoated paper.It bụ nwa ntụpọ na osisi pulp.The grammage bụ 120g, 150g, 180g, 200g, 220g, 250g, 280g, 300g-400g.The tumadi eji bụ maka mkpuchi igbe, nchekwa, labeelu, kaadị aha, igbe onyinye, akpa aka, akwụkwọ ụlọ akwụkwọ na igbe ngwa ahịa.
Oge ezipụ: Sep-13-2021